Dr. Tint Swe's Writings: Abscess ကိန္နရာနာ နှင့် ခူနာ
Abscess ကိန္နရာနာ နှင့် ခူနာ
၁။ မင်္ဂလာပါ ဆရာရှင့်။ ကျွန်မအသက်က ၂၇ နှစ် အိမ်ထောင်သည်ပါ။ ယခုသားဦးကိုယ်ဝန် ၈ လကျော်ထဲမှာပါ။ ကျွန်မ သိချင်တာလေးရှိလို့ပါ ရိုင်းသွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါဆရာ။ ကျွန်မရဲ့ဆီးခုံနဲ့ပေါင်ခြံနားမှာ အနာဖုလား အကျိတ်ဖုလားမသိ ပေါက်နေလို့ပါ။ ကိုယ်ဝန်နဲ့ဆိုတော့ ဘာဆေးသောက်ရမလဲ မသိလို့ပါဆရာ။ လောလောဆယ်တော့ ဆရာခိုဘဲ လိမ်းနေရတယ်။ အဲအဖုကနာတယ်ဆရာ ပေါင်ခြံနားဆိုတော့ အထိုင်အထလုပ်ရတာ လမ်းလျှောက်ရတာ အဆင်မပြေလို့ပါဆရာ။ ဆရာလည်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာပါစေနော် ။
ပုံပါပို့တယ်။ အဲလိုနေရာမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ကြွက်နို့နဲ့ မတူ၊ အနာနဲ့တူတယ်။ အရပ်ဆေးတွေမှာ ဆေးသုတေသနမရှိပါ။
၂။ ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက် ၂၉နှစ်။ သား ၂ယောက်အမေပါ။ မရိုမသေဆရာ ကျွန်မတင်ပါးမှာ သွေးစုနာလို့ပေါက်နေလို့ပါ။ အရမ်းနာတယ်ဆရာ။ ၃ရက်ရှိပါပြီ။ ပြည်ဖုသေးသေးလေးကို ကျွန်မဖောက်လိုက်ပါတယ်။ အခု ဘုက ယောင်ပြီး အရမ်း နာတယ်ဆရာ ထိုင်လဲနာတယ်။ ဖိလို့မရဘူး။ တင်းပြီးဆွဲဆုတ်ထားသလိုပဲ။ ဘာဆေးသောက်ရမလဲဆရာ။ ဘာဆေးလူးရင်ရလဲ ဖြေပေးပါဦးနော်ဆရာ ကျေးဇူးပါ။
၃။ ဆရာခင်ဗျာ ကျနော့်အမျိုးသမီးမှာ ခူနာရောဂါကို ခံစားနေရပါတယ်။ ဟိုအရင် သူငယ်စဉ် အချိန်မှာလဲ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျနော်သိချင်တာက အဲဒီရောဂါက ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဖြစ်စေလဲဆိုတာရယ်၊ ဘာ့ကြောင့် ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာရယ်၊ ဘယ်လိုကုသပျောက်ကင်းနိုင်သလဲ ဆိုတာလေး ပြောပြပေးပါ။ နောက်ထပ် အဒီရောဂါကို အမြစ်ပြတ်အောင် ကုသလို့ ရသလား ဆိုတာရယ်၊ ဘယ်လို ကာကွယ်ရမယ် ဆိုတာရယ်ကိုပါ ရှင်းပြပေးပါ ဆရာခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးများဟာ နာမည်ပေး အလွန်ကောင်းသလို အတော်လွယ်လွယ်ပေးတတ်ကြတယ်။ တခြားဟာတွေက ပြဿနာသိပ်မရှိပေမဲ့ ရောဂါနာမည်က တလွဲရောက်စေတတ်တယ်။ အရေပြား အထူနဲ့အပါး တနေရာ ပျက်စီးတာမှန်သမျှ Ulcer လို့ခေါ်တယ်။ အနာလို့ဘာသာပြန်နိုင်ပါတယ်။ အနာမှာ ပြည်ရှိလာရင် Abscess ခေါ်ပါတယ်။ ပြည်တည်နာ ခေါ်တယ်။ ချိုင်း (ဂျိုင်း)မှာ ပေါက်ရင် ကိန္နရာနာ ခေါ်ကြတယ်။ ချိုင်းကနာလို့ လက်ကို ကိုယ်မှာမကပ်နိုင်တော့ ကိန္နာက ကသလို နေရတာမို့ပါ။
အနာနဲ့ ပြည်မတည်ခင် အနာဖြစ်တဲ့နေရာမှာ လက္ခဏာ ၅ ပါးဖြစ်လာတယ်။ ဖြစ်တဲ့နေရာ တစ်ရှူး ခေါ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းဟာ နီ-နာ-ရောင်-ပူ ဆိုတာအပြင် သူလုပ်ရမဲ့ အလုပ်ကို မလုပ်နိုင် ဖြစ်လာတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ Infection ရောင်ခြင်းဆိုတာသာ ရှိပါသေးတယ်။ ရောဂါနာမည်တွေ အဆုံးမှာ -itis ပါရင် ဒါဖြစ်တာလို့ မှတ်ပါလေ။ Stomatitis လျှာနာ၊ Conjunctivitis မျက်စိနာ၊ Appendicitis အူအတက်ရောင်၊ Hepatitis အသည်းရောင် စတာတွေ။
ဒီအဆင့်မှာ လုပ်ပေးဘို့က ပိုးကိုနိုင်တဲ့ဆေးတွေ ပေးရမှာပါ။ နောက်မှာ ပိုးဝင်လာတတ်တာမို့ပါ။ ပိုးကိုနိုင်တဲ့ဆေး အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ ပဋိဇီဝဆေးလို့ ဆေးစာကို ခန့်အောင် ပါဠိစာ သုံးထားတာပေါ့။ ဗမာတွေသာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူများတွေလဲ ရှေးကျတဲ့ ဂရိစာကို အတော် သုံးကြတာ။ ဆေးပညာ အထိမ်းအမှတ်ကိုတောင် ဘီစီ ၂ဝဝဝ က ဆူမေရီယန်းဘုရား Ningishzida နဲ့ မြွေနှစ်ကောင် Gryphons ကို ခုထိ သုံးကြတယ်။
ပိုးကိုနိုင်တဲ့ ပဋ္ဋိဇီဝဆေးတွေကို အုပ်စု (၁၃) ခုတောင်ခွဲထားတာ။ အစောဆုံးပေါ်ခဲ့တာက Sulfonamides (ဆာလ်ဖိုနမိုက်) အုပ်စုပါ။ အတော်များများလဲ သုံးတတ်ကြတယ်။ Sulfacetamide မျက်စဉ်း၊ Trimethoprim-Sulfamethoxazole ကို Septrin လို့ ပိုသိကြတယ်။
နောက်ပေါ်ကတော့ Cephalosporins ကက်ဖလိုစပိုရင်ဖြစ်တယ်။ နောက်ပေါ်ထဲမှာ နောက်ပေါက်တွေရှိတယ်။ မျိုးဆက်တွေ ထပ်ထပ် တိုးလာလို့ အခုဆို မျိုးဆက် လေးခုတောင် ရှိနေပြီ။ ဒီအုပ်စုဆေးတွေက Cef နဲ့စတယ်။ ပဌမမျိုးဆက် Cefadroxil, Cephalexin, Cephaloridine, Cephalothin, Cephapirin, Cefazolin, Cephradine ဒုတိယမျိုးဆက် Cefaclor, Cefoxitin, Cefprozil, Cefuroxime တတိယမျိုးဆက် Cefdinir, Cefixime, Cefpodoxime, Ceftibuten, Ceftriaxone, Cefotaxime စတုတ္ထမျိုးဆက် Cefepime, Cefluprenam, Cefozopran, Cefpirome, Cefquinome တွေ။
Clindamycin 300-450 mg ၈ နာရီခြား၊ ၅-၇ ရက်။
Cephalexin 250-500 mg ၄ နာရီခြား၊ ၅-၇ ရက်။
Dicloxacillin 250-500 mg ၆ နာရီခြား၊ ၅-၇ ရက်။
Doxycycline 100 mg ၁၂ နာရီခြား၊ ၅-၇ ရက်။
Trimethoprim-sulfamethoxazole (160 mg/800 mg) တခါသောက် ၁-၂ ပြား၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၅-၇ ရက်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေအတွက် ပဋိဇီဝဆေး ရွေးရမယ်။ Am0oxicillin ဆေး၊ Ampicillin ဆေး၊ Clindamycin ဆေး၊ Erythromycin ဆေး၊ Penicillin ဆေး၊ Ampicillin-Sulbactam ဆေး၊ Ceftriaxone ဆေးနဲ့ Cefixime ဆေး တခုခု ရွေးနိုင်တယ်။
ပိုးကိုနိုင်ဆေးတွေအပြင် အနာအရောင်ကို သက်သာဆေးလဲ ပေးသင့်တယ်။ ပါရာစီတမောနဲ့ အိုင်ဘူပရိုဖင်ဆေး တခုခုသုံးနိုင်တယ်။ အနာမှန်သမျှကို ငြိမ်ငြိမ်ထားပေးရင် အနာကျက် မြန်စေတယ်။ အရိုးကျိုးရင် မလှုပ်နိုင်အောင် ကျပ်စည်း၊ ကျောက်ပတ္တီးစည်းရတယ်။ အနာမပေါက်ခင် အပေါ်ကနေ ပိုးသတ်ဆေးရည်တခုခု လိမ်းပေးတာလည်း အကျိုးရှိတယ်။ ဒက်တော၊ အရက်ပြန်၊ အိုင်အိုဒင်း။ ရေ-ဆပ်ပြာနဲ့ မကြာမကြာဆေးပေးပါ။ အပူပေးတာဟာ သွေးကို ပိုလျှောက်စေတာမို့၊ အနာကို မြန်မြန်ပျောက်စေတဲ့သဘောရှိတယ်။ ရေနွေးအိပ် တင်တာ၊ ရေနွေးပုလင်း ကပ်တာ။ ပရုပ်ဆီ လိမ်းတာ၊ ဇာတိပ္ဖိုလ်သီးသွေးလိမ်းတာ၊ ကြပ်ထုပ်ထိုး၊ ကြပ်ပူတိုက်တာလည်း ဒီအတွက်ဖြစ်မယ်။ ပြည်ရှိလို့ခွဲရရင် အဲလိုလိမ်းထားတာတွေက ခက်ခဲစေတယ်။
အနာဆိုတာ ပြည်တည်လာရင်တော့ ခွဲထုတ်ရမယ်။ ခွဲစိတ်ပညာမှာ ပြည်ရှိရင်-ခွဲထုတ်ဆိုတာ ဖေါ်မြူလာပါ။ ဦးနှောက်၊ ခြေထောက်၊ အသည်း၊ ဘယ်ထဲရှိရှိ ပြည်ကို ထုတ်ရပါမယ်။ ပြည်ပေါက် ပျောက်ပြီဆိုတာ အမှန်ပါ။ အနာက အတွင်းနက်မှာဖြစ်ရင် တော်တော်နဲ့ မပေါ်ဘူး။ ဥပမာ တင်ပါး၊ ရင်သား။ ဖြစ်တဲ့နေရာ အနီးအနားမှာ အာရုံကြောရှိရင် ပိုနာမယ်။ လက်ချောင်း ခြေချောင်းတွေမှာ နေရာက ကျဉ်းတော့ အာရုံကြောနဲ့မဝေးဘူး။ ဒါ့ကြောင့် နာတယ်။
နို့စို့အရွယ် အဇာတသတ်ရဲ့လက်မှာပေါက်တဲ့အနာကို ခူနာလို့ ပြောဟောကြတယ်။ သူ့အနာက ပြည်မှည့်နေချိန်မို့ ခမည်းတော် ဗိမ္ဗိသာရမင်းကြီးကနေ ပါးစပ်ထဲမှာ ငုံထားပေးတဲ့အခါ ပြည်ပေါက်ထွက်သွားရတယ်။ မင်းတရားကြီးဟာ သမားတော်ဇီဝကရဲ့ ဆေးညွှန်းအရ လုပ်တာတော့ ဟုတ်မယ်မထင်။ နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်လာရင် ဆီးဖြူ-ဖန်ခါး ငုံထားသလိုဆိုပြီး ပြောလေ့ရှိတာကြောင့် နေမှာပါ။ ကိုယ်အပူချိန် အာငွေ့ဆိုတာက ၃၇ ဒီဂရီ ရှိလို့ အပြင်လေထက် ပိုပူမယ်။ ဒါက ပုံမှန်ဆိုရင်သာ ပြောရတာ။ မိဘမေတ္တာကို ညွှန်းရင် အထိမိဆုံး ဥပမာရှိခဲ့သလို၊ ဇနီးသည်မှာ ခူနာပေါက်လို့ အဲလို ငုံပေးသူရှိလာရင်တော့ ချစ်မေတ္တာပုံပြင်သစ်ကလေးတခု တိုးလာပါမယ်။ Smile!
မြခြူသံ (မာမာအေး) http://www.som24horas.com.br/listen/sjpnahgpeyri-144844155
• Abscess ခူနာ ခေါ်သော ပြည်တည်နာ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/…/04/blog-post.html
• Cellulitis (သို့) Erysipelas အရေပြားရောင်နာ http://doctortintswe.blogspot.com/…/cellulitis-erysipelas.h…
• Infections ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းများ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/infections.html
• Injection Abscess ပြည်တည်နာ (၂) https://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/injection-abscess.html
• Injury First Aid ထိခိုက်ဒဏ်ရာပြုစုနည်း http://doctortintswe.blogspot.com/…/04/injury-first-aid.html
• Skin infections (Ulcer) အနာ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/11/skin-infections-ulcer.html
• Sterilization ပိုးသန့်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/sterilization.htm
• Boils မွေးကျွတ်နာ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/boils.html
မန္တလေး စာအုပ်လမ်း စာပေအလှူ တဦးလျှင် (၁) အုပ်နှုန်း အခမဲ့ရယူနိုင်ပါသည်။ ရွှေချထားဖို့ကောင်းတဲ့ စေတနာ။ စိန်စီထားသင့်တဲ့ သတ်ပုံမှန်လက်ရေးစာ...
► 2018 (3129)
X-ray and Pregnancy ကိုယ်ဝန်နှင့် ဓါတ်မှန်
ကျန်းမာ နဲ့ ကျမ္မာ
TB neck gland တီဘီအကျိတ်
Drugs and Drinks Links မူးနေအောင်ရေးရတဲ့စာတွေ
စိုင်း နှင့် ဆိုင်း
ဖြတ် ဖျတ် ဖျက်
Organic Onion မင်းရွာကြက်သွန်
My home မုံရွာ ရတနာပုံကအိမ်
One Thousand and One Nights တထောင့်တည ပုံပြင်များ
Nutrition for women အမျိုးသမီးများအတွက်အာဟာရ
H line on your palm လက္ခဏာရေးကြောင်း
Body hair တလွဲဆံပင်ကောင်းသူများ
မပြောင်းသေးတဲ့ အသစ်တွေလဲ ရှိသေးတယ်ဆရာ
Hair Loss ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း
Foreign လူသစ်များသို့ပေးစာ (၂)
India minister says sin causes cancer ကင်ဆာနဲ့ အကု...
When was the Buddha born?
Lolo skinny patch ဗိုက်ချပ် ကပ်ခွါ
Garcinia Cambogia ပိန်ဆေး
A Clear Vision စစ်မှန် ပီသ ကြည်မြပါစေ
Jasmine စပယ် နှင့် စံပယ်
Agony ဆီးလမ်းကျောက်က နာခြင်း
Postpartum depression ကလေးဖွါးပြီးဖြစ်တဲ့ စိတ်ကျရေ...
IUCD ကိုယ်ဝန်တား သားအိမ်ထဲထည့်ထားရတဲ့ပစ္စည်း
Pelican and Fish ဗျိုင်း ငါးဖမ်း ပုံပြင်
Medicine during pregnancy ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ဆေးများ
Wisdom Teeth အံဆုံးပေါက်ခြင်း
Pleural effusion အဆုတ်အိတ်ထဲ အရည်အောင်းခြင်း
H mole စပျစ်သီးကိုယ်ဝန်
ရုပ်ထု နှင့် ရုပ်တု
သုံး သုန်း သုည်း
Bad Writing စာရေးမကောင်းတဲ့ ဆရာဝန်
White discharge အဖြူဆင်းခြင်း
စ နဲ့ ဆ
ဆက်ကြောတင်း နှင့် ဇက်ကြောတင်း
နူတ် နုတ် နုပ်
Takeapill ဆေးတလုံး သောက်ပါ
Balm ကျားဘမ်း ပရုပ်ဆီ
Exercise after Surgery ခွဲစိတ်ထားပြီး လေ့ကျင့်ခန်း...
ရေ ရည် ခွံ ခွန် ခွင်
Bamboo Bed ဝါးကွပ်ပြစ်
Pick A Star In The Sky ကောင်းကင်တမွတ် ကြယ်ကိုဆွတ်
Beauty အလှကိုယ်စီ ရှိကြသည်
Bamboo Forest ပျိုတို့မောင်ယာမလုပ်တယ် ဝါးခုတ်တဲ့တေ...
စင်း နဲ့ စဉ်း
Exluton နို့တိုက်မိခင် ကိုယ်ဝန်တားဆေး
Blood Pressure သွေးဖိအားအကြောင်း
စုတ်ဖွားတွေကို ဖြတ်ကျော်သွားပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာစာ
Dengvaxia သွေးလွန်ုတုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေး
Dictators and Rulers အာဏာရှင်ကြီးများနှင့် အုပ်စို...
Food Storage and Safety Guidelines အစားအသောက် သိုေ...
Thanksgiving သင့်စ်ဂစ်ဗင်း ဆိုတာ
Naked Beach ကမ်းခြေတနေရာ
မီ နဲ့ မှီ
စစ် နှင့် ဆစ်
Oral hygiene kids ကလေးခံတွင်းသန့်ရှင်းရေး
ဘက် နဲ့ ဖက်
Seasonal Foods ရာသီစာ
JE Vaccine Links ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင် ကာကွယ်ဆေးစာမျ...
သေမင်းထံပါး ငါမသွားမီ (တင်မိုး)
► 2015 (2286)